Soo-saareyaasha Kuleyliyaha Hawada - Shiinaha Warshadaha Isweydaarsadayaasha Hawada & Shirkadaha
Hawo-qoyaan hawo cusub
La socoshada tayada hawada iyo huurka gurigaaga ayaa muhiim u ah caafimaadkaaga iyo raaxadaada, iyo sidoo kale ilaalinta gurigaaga iyo waxyaabahaaga. Qalabka loo yaqaan 'Holtop central huhuumiyaha' waxaa loogu talagalay inuu la shaqeeyo nidaamyada kale ee HVAC si gurigaaga loogu keeno hawo banaanka oo nadiif ah oo nadiif ah. Mabda'a Shaqada ee Holtop Fresh Air Dehumidification Systems Holtop Nadiifinta iyo nadiifinta hawo nadiifintu waxay qaadataa mabda'a qaboojinta huurka. Adoo yareynaya heerkulka hawada, siyaado ah ...
Sida horumarinta dhaqaalaha, isticmaalka culus ee dhuxusha iyo shidaalka si loo soo saaro boodhka, kaarboon laba ogsaydhka, baaruud dioxide iyo walxo kale oo waxyeelo leh, taas oo horseedda cimilo aan caadi ahayn, wasakhda hawada ee daran, waxay si weyn u kordhisay uruurinta waxyaalaha yar yar ee wanaagsan (PM2.5). Waxay si dhab ah u saameynaysaa shaqadeena, nolosheena iyo caafimaadkeena. Marka loo barbardhigo isweydaarsiga hawo-dhaqameedka cusub, hoos ayaa ah faa'iidooyinkeenna: 1.The labada heer-soo kabashada kulaylka nidaamka la bamka kuleylka iyo ku-beddelaha kuleylka hawada. 2.Flatlatio wasakh ...